Lioka 1 - Ny Baiboly
Lioka toko 1
5Tamin'ny andron'i Heroda mpanjakan'i Jodea, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria isan'ny fianakavian'i Abià, ary ny vadiny dia taranak'i Aarona sy natao hoe Elizabeta. 6Samy marina teo imason'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanan-tsiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny Tompo rehetra. 7Tsy nanan-janaka izy, fa momba Elizabeta, ary efa samy zokiolona izy mivady.
8Indray andro, nony nanao ny raharahan'ny mpisorona teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny anjaran'ny antokony, 9dia voatendrin'ny loka araka ny fanaon'ny mpisorona hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo, hanolotra ny emboka, 10ary ny vahoaka rehetra dia tao alatrano no nivavaka, tamin'ny ora fanolorana ny emboka. 11Fa nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy, nitsangana teo an-kavanan'ny otely fanolorana ny emboka. 12Taitra Zakaria nony nahita azy ka raiki-tahotra. 13Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no hataonao anarany: 14dia ho faly sy ho ravo hianao, ary maro koa no ho faly amin'ny hahaterahany. 15Fa ho lehibe eo imason'ny Tompo izy: tsy hisotro divay na zava-mahamamo izy, sady ho fenon'ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny; 16maro amin'ny zanak'Israely no hampodiny amin'ny Tompo Andriamanitra, 17dia hialoha azy amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny olo-marina, hamboatra firenena voavonona ho an'ny Tompo.
18Dia hoy Zakaria tamin'ny anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary koa efa zokiolona ny vadiko. 19Namaly ny anjely nanao taminy hoe: Izaho no Gabriely, ilay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina aho hiteny aminao hampandre anao izany teny mahafaly izany; 20fa indro, ho moana hianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan'izany, noho hianao tsy nino ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoan'androny. 21Niandry an'i Zakaria anefa ny olona ka gaga noho izy naharitra ela tao anatin'ny tempoly; 22kanjo nony nivoaka izy, dia tsy nahay niteny taminy, ka fantatry ny olona fa nahita fahitana tao anatin'ny tempoly izy: dia baikon'ny moana no nitenenany taminy, fa moana tokoa izy.
23Ary nony tapitra ny anjara androny amin'ny raharahany, dia nody tany an-tranony izy. 24Ary taorian'izany andro izany dia nitoe-jaza Elizabeta vadiny, ary niery dimy volana ka nanao hoe: 25Izao no nataon'ny Tompo tamiko, tamin'ny andro nitsinjovany ahy hahafa-tondro-maso ahy amin'ny olona.
26Ary rahefa nandray enina izy, dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, 27ho any amin'ny Virjiny anankiray fofom-badin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranak'i Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia Maria. 28Ary nony niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: Arahaba, ry ilay feno hasoavana, ny Tompo ao aminao; nosoavina noho ny vehivavy hianao. 29Taitra izy nahare izany, ka nieritreritra izay tokony ho hevitr'izany fiarahabana izany. 30Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra hianao. 31Ary indro, hitoe-jaza hianao, ka hiteraka zazalahy, ary Jesoa no hataonao anarany. 32Ho lehibe izy ka hatao hoe Zanaky ny Avo indrindra; dia homen'Andriamanitra ny fiketrahan'i Davida rainy izy, ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, 33ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.
34Fa hoy Maria tamin'ilay anjely: Ahoana no hahatongavan'izany, fa tsy mahalala lahy aho? 35Ny Fanahy Masina, hoy ny anjely namaly azy, no ho tonga ao aminao, ary ny herin'ny Avo indrindra hanaloka anao; noho izany dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra ny Masina haterakao. 36Ary indro, Elizabeta rahavavinao dia efa mitoe-jaza koa na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, 37fa tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao. 38Dia hoy Maria: Inty aho ankizivavin'ny Tompo, aoka anie ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely.
56Nitoetra tokony ho telo volana tao amin'i Elizabeta Maria vao nody tany an-tranony.
57Ary nony tonga ny andro hiterahan'i Elizabeta dia tera-dahy izy. 58Ary nahare ny miara-monina aminy sy ny havany fa efa nankalazain'ny Tompo ny famindram-pony taminy, ka dia niara-nifaly taminy. 59Nony afaka havaloana, dia tonga izy hamora ny zaza, ary Zakaria, araka ny anaran-drainy no ndeha hataony anarany. 60Fa niteny reniny nanao hoe: Tsia, tsy izany, fa hatao hoe Joany izy. 61Fa hoy izy ireo taminy: Tsy misy na dia iray aza amin'ny havanao manana izany anarana izany. 62Ary nanao baikon'ny moana tamin'ny rainy izy ireo nanontany izay tiany hatao anarany. 63Dia nangataka fàfana izy, ary nanoratra hoe: Joany no anarany; ka gaga daholo izy rehetra. 64Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny vavany, ary nivaha ny lelany, dia niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. 65Azon'ny tahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina, ary niely hatraiza hatraiza tany amin'ny tendrombohitr'i Jodea izany zava-mahatalanjona rehetra izany. 66Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe: Ho inona re ity zaza ity? Fa nomba azy ny tànan'ny Tompo.
67Ary dia feno ny Fanahy Masina Zakaria rainy, ka naminany hoe:
68Isaorana anie ny Tompo Andriamanitr'Israely, noho izy namangy sy nanavotra ny olony, 69ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika tao amin'ny fokon'i Davida mpanompony, 70araka ny nolazainy tamin'ny vavan'ireo mpaminaniny masina hatramin'ny andro tany aloha, 71mba hamonjy antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tànan'izay rehetra mankahala antsika.
72He izany nanaovany famindra-po tamin'ny razantsika sy nahatsiarovany ny fanekeny masina, 73dia ilay fianianana nataony tamin'i Abrahama razantsika hanome antsika 74fahafahana amin'ny tànan'ny fahavalontsika, mba hanompoantsika azy tsy aman-tahotra, 75amim-pahamasinana sy fahamarinana, eo anatrehany amin'ny andro rehetra hiainantsika.
76Ary hianao kosa, ry zaza, dia hatao hoe mpaminanin'ny Avo indrindra, fa hialoha ny Tompo hianao hamboatra ny halehany, 77mba hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny helony:
78Noho ny halehiben'ny famindra-pon'ny Andriamanitsika nampiposaka ny Masoandro hamangy antsika avy any ambony, 79mba hanilo izay rehetra mipetraka ao amin'ny maizina sy amin'ny aloky ny fahafatesana, ka hitarika ny diantsika ho amin'ny làlam-piadanana.
80Dia nitombo sy nihahery fanahy ny zaza, ary nitoetra tany an'efitra, ambara-pahatongan'ny andro hisehoany amin'Israely. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0099 seconds